Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Jamie Vardy Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-hadalada
Taariikhdeena Jamie Vardy Biography wuxuu soo bandhigayaa warbixin buuxda oo ku saabsan Taariikhdiisa Carruurnimada, Nolosha Hore, waalidiinta, Xaqiiqada Qoyska, Xaaska, Caruurta, Nolosha Qofka iyo Noloshaada. Si fudud, waxaan ku siinaynaa falanqeyn buuxda oo ku saabsan Taariikhdiisa Nololeed, laga bilaabo Jamie Vardy Maalmihii Hore ilaa markii uu caan noqday.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay 'Fox degdeg ah' (naaneyskiisa) waa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu orodka badnaa ee jiilalkiisa. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya Jamie Vardy's Biography kaas oo aad u xiiso badan, Hadda oo aan lahayn adieu dheeraad ah, aan bilowno.
Sheekada Carruurnimada Jamie Vardy:
Jamie Richard Vardy wuxuu ku dhashay maalinta 11th ee Janaayo 1987 ee Sheffield, UK. Waxa uu ku dhashay hooyadiis, Lisa Vardy (oo ah qareen shaqaalihii hore) iyo aabihii, Richard Gill (oo ahaa shaqaale hore u ahaa crane).
Jamie wuxuu ku koray meel qoyseed ah oo qoyskeeda ah wuxuuna ku noolaa caruurnimad xumo markii uu koray Hillsborough.
Halka Jamie Vardy koray. Ku darso DreamTeamFC.
Sheekadiisa carruurnimadu waa feker dhab ah oo ku saabsan dhibaatada, dulqaad iyo adkaysi. Sheeko 'Rags-to-Riches' sheeko shaqaale warshad leh oo bedelay superhero kubada cagta.
Jamie jaceylka kubada cagta ayaa si dabiici ah u yimid qeybtii hore ee caruurnimada. Adiga, wuxuu go'aansaday inuu kubadda cagta u qaato sidii xirfad uu ku yimid sanadihii dhexe. Waalidiintiisa ayaa taageeray go'aankiisii ​​ahaa in si buuxda loo xoojiyo iyada oo aan wax kale jirin, xitaa waxbarashada ayaa la tuuray, ka dibna, wuxuu ku hadli karaa oo qori karaa Ingiriisi.
Jamie Vardy Sanadihii Hore - Dhismaha Xirfadda:
Jamaah Vardy ayaa kubada cagta u arkay inuu kubada cagta ku bilaabi doono da 'aad u da' yar. Markii hore, riyadii Jamie Vardy waxay aheyd inay ka ciyaaraan kubada kubada cagta ee ugu sareysa. Nasiib darro, nasiib darro, ayaa geeriyootay markii Sheffield Wednesday uu ahaa mid aan la fileyn.
Kooxda ayaa sii deysay Jamie Vardy sababtoo ah wuxuu ahaa aad u yar iyo caato. Adiga oo jooga Jamie sida hoos ku sawiran waxaa loo tixgeliyey midka ugu yar iyo midabka ugu da'da yar ee da'diisa.
Jamie Vardy Nolosha Hore ee Shaqada
Warkaan diiddani wuxuu dhaliyey niyadjab badan oo aan la hubin wiilka yar. Waxay ahayd mid naxdin leh maxaa yeelay Sheffield Wednesday wuxuu ahaa koox nasiib u leh noloshiisa oo dhan.
Jamie Vardy Biography- Wadada loo maro Magaca:
Diidmada Sheffield United ayaa ka dhigtay Vardy marnaba inuu ka fekero kubada cagta. Codsigii gabi ahaanba iloobey kubadda cagta, Vardy waxa uu qabsaday shaqo farsamo oo hooseeya halkaasoo uu ku noolaa nolol. Jamie Vardy mar wareysi lagu sheegay;
"Waxaan ahaa farsamayaqaan fiilo farsamo. Shaqadaydu waxay ku lug leedahay samaynta boobka dadka curyaamiinta leh cagaha lugta. Waa inaan sameynaa wax badan oo keenaya dhalooyinka kulul. Waxaan si joogta ah u qaadnay waxyaalo boqolaal jeer ah maalintiiba waxayna dhaawici jireen dhabarkaygii. "
Warbixinnada ayaa tilmaamaya in Jamie shaqeeyay saacadaha 12 ee shaqada uu ku shaqeynayo.
Intii aan ka shaqeyneynay warshadda, qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha Jamie Vardy ayaa ogaa inuusan ahayn wicitaankiisa. Waxa ay dadaal badan u gashay qofkii istaagay oo u soo jeestay. Jamie Vardy ayaa si aad ah uga dhaadhiciyay saaxiib la shaqeeya iyo asxaabtiisa oo kula taliyay inuu kubada siiyo fursad labaad.
Jamie Vardy Rise to sheekooyinka Taariikhda Taariikhda:
Sida laga soo xigtay DreamTeam FC, waxay ahayd markii ay u muuqatay in Vardy lagu ciqaabi doono noloshiisii ​​caadiga ahayd ee uu noloshiisa ku beddelay sababtoo ah go'aankiisii ​​ahaa inuu ka tago warshadda Carbon Fiber oo ku soo laabtay kubadda cagta.
Kadib markii uu mar kale ku celiyay fikir weyn, Jamie ayaa ku soo laabtay raadinta koox uu rajeynayo inuu aqbalo. Waqtigan, koox ka hooseeya 'Wickersley Youth ee Rotherham ' wuxuu siiyey fursad.
Fikrado sida wakhtigu u safray. 5 sano ka dib ayaa la gaarsiiyey 2016, jimcihii hore Jamie Vardy ayaa wali u ciyaaraya qaybta 7aad ee kubada cagta ee kubada cagta ee 30 oo noqday horyaalka Premier League iyo gooldhaliyaha ugu sareeya. Inta kale, sida ay sheegaan, hadda waa taariikh.
Jamie Vardy Xiriirka Nolosha- Gabadha, Xaaska iyo Caruurta:
Iyada oo Jamie uu ku faani karo sumcad, su'aasha ku saabsan farriinta qof walba waa ... Waa jacayl saaxiibteeda Jamie, xaas ama WAG? Waxay tahay Rebekah oo ku dhashay maalintii 7th Febraayo 1982 (5 sano oo ka weyn ninkeeda).
Photo of Rebekah. Ku darso The Independent.
Vida ayaa la kulmay xaaskiisa Rebeqah Nicholson oo ku jirta 2014 iyagoo u shaqeynayay sidii looxidhiidhay habeenkii. Sheekada jacaylku waxay ku bilaabantay 2014 markii Vardy uu shaqaalaysiiyay Rebekah si uu u abaabulo xafladda dhalashadiisa. Xanuunada jacaylku way duulaan marka jawaabta qorshaha dhalashada la siiyo iyo inta kale, sida ay yiraahdaan, waxay noqdeen jacayl.
Jamie iyo saaxiibkiisa Becky.
Labadaba jecel yahiin labadii sanadood ka hor intaanay guursanin 26th May, 2016 oo ku taal ceelka prestigious celeb fave Peckforton on 26 May 2016,
Wadajir, waxay leeyihiin saddex carruur ah oo noolool ah. Jamie Vardy wuxuu lahaa labo carruur ah (Sofia Vardy,
iyo Finley Jaiden Vardy oo ku dhashay 2014 iyo 2017) xaaskiisa iyada oo mid ka mid ah xiriirkii hore.
Carruurtii Rebeqah ee hore u ahayd:
Rebekah ayaa sidoo kale leh gabadh iyo wiil magaciisu yahay Megane iyo Taylor, kuwaas oo wakhtiga qoraaga loo sheegay inay yihiin 13 iyo 8 siday u kala horreeyaan (bishii Maarso 2019). Megan iyo Taylor labaduba waxay si joogta ah u soo bandhigeen xisaabta Instagram.
Ku darso Yahoo nololeed Singapore.
Carruurta Jamie Vardy ee ka soo jeeda Xiriirkii hore:
Jamie Vardy ayaa leh gabadh la yiraah Ella Vardy, oo ku dhashay 2010, iyada oo saaxiibkiisii ​​hore ee Emma Daggett.
Jamie Vardy Caruurnimada Nolosha Qofka:
Helitaanka in la ogaado Jamie Vardy Nolosha Shakhsiyeed waxay kaa dhigi kartaa sawir buuxa oo ku saabsan. Bilowgii, Jamie waa nin sadaqo ah oo jecel inuu ku deeqo dadweynaha sababo kubadda cagta. Jamie ayaa markii ugu horeysay bilaabay naqshadkiisa V9 Academy bishii November ee 2015.
V9 waa barnaamij xero sannadle ah oo ay soo saartay Jamie si ay u bixiso tababar iyo hanuuninta ciyaartoy aan ka tirsaneyn League. Hadafkaasi wuxuu u fidiyaa ciyaartoydan fursad gaar ah si ay u muujiyaan awooda cayaaraha kubada cagta marxalado badan oo daawadayaasha ah.
Jamie Vardy waxay u gashay sadaqo sababtoo ah waxa uu ogyahay inay jiraan dad badan oo halkaa jooga kuwaas oo wali ku dhibtoonaya inay helaan fursad ay ku ciyaaraan heerka ugu sareeya.
Jamie Vardy Nolosha Qoyska:
Vardy ayaa muujinaya waalidiintiisa iyo qoyskiisa shaqeeya oo leh qiimo badan oo isaga u leh. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka uu la leeyahay qoyskiisa ma ahan mid ku shaqeynaya dabagal wanaaga sannadihii la soo dhaafay.
Ma ogeyd?… Jamie Vardy ayaa mar hore ku dhacday iyada hooyadeed (Lisa), Aabe (Phil) iyo awoowe ayeeydiisi go'aankiisa ahaa in ay la qabsadaan Becky Nicholson. Qoyskiisa ma aqbalin gabadhii horay uqaaday ee habeenkii ee Becky
Ku darso Daily Star iyo Mirror
Diidmada ay aroosaddooda u geysatay ayaa sababtay in ay isku dhacaan Jamie Vardy iyo waalidiintiisa taas oo keentay inayan ka qayb galin arooskiisa. Xitaa awoowayaasha Jamie Vardy Gerald iyo Mavis ayaa sidoo kale la waayay iyada oo ka dhalatay kacdoonkii qoyska.
Sida laga soo xigtay Sharci, Guddoomiye kuxigeenka Leicester ayaa hal mar u furay Jamie Vardy horey ugu jirtay qaab nololeedkiisa. Waxa uu sidoo kale sheegay inuusan marnaba dooneynin in kooxda ay Vardy kala soo saxiixato qeybta Ingiriis hoose. Aiyawatt Srivaddhanaprabha waxay lahayd fikradaan sababtoo ah caado u cabbitaanka Jamie Vardy.
"Ma aanan ka warqabin arrintan illaa qof uu ii sheegay in uu tababar u yimid intuu weli sakhraanayay. Wuxuu sheegay inuusan ogeyn waxa la samaynayo noloshiisa. Jamie waligeed ma kasbatay lacag aad u tiro badan. " Ayuu yiri Srivaddhanaprabha.
Ka dib markii uu hadal aad u adag ku hadlo, Vardy ayaa go'aansaday inuu bedelo habkiisa. Wuxuu ka tagay cabitaan wuxuuna bilaabay inuu si adag u shaqeeyo tababarka.
Jamie Vardy Xaqiiqooyin La'aan
Ku soo dhowow Thailand Monk:
Qaar ka mid ah Taageerayaasha Kubadda Cagta Jamie Vardy ayaa ku eedeeyay awoodda kubada cagta ee kubadda cagta oo ka timid Thailand Monks oo u safray 6,000 Kaamirada oo ka timid Thailand ilaa Leicester. Dad badan ayaa aamisan inay tani tahay sababtii uu ku guuleystay intii lagu jiray 2015 / 2016 xilli kooxda uu ku guuleystay Premier League.
Jamie Vardy ayaa mar horeba ku jirtay xawaaraha ugu sareeya ee xawaaraha sare ee 22 saacaddii saacada horyaalka ee 2015 / 2016. Hoos waxaa ku qoran fiidiyowga jimicsiga quruxda badan ee Jamie Vardy. Ku darso TEE MOORE.
Markii lagu eedeeyay takoorka:
Bishii Agoosto ee 2015, Jamie Vardy ayaa lagu duubay Kantarool ku saabsan dambi culus oo taageerayaal loo aqoonsaday 'diidmo jinsi ah'. Dhacdadani waxay timid markii filimka Jamie Vardy lagu arkay marar badan oo uu ugu yeeray nin u dhashay East Asian ah 'siin'.
-'Wicitaanka qof magacan waxaa badanaa loo tixgeliyaa dembi-. Inkasta oo raali galin lagu sameeyay qaladaadka garsoore, Jamie ayaa la ganaaxay, waxaana uu hoosta ka xariiqay kooras waxbarasho oo qarsoodi ah oo uu leeyahay kooxda Leicester City FC.
Markii ay sii socotay xornimada:
Ma ogeyd?… Sannadkii hore 2007, Jamie Vardy ayaa lagu helay dambi ka dhacay meel ka baxsan xerada. Tani waxay ka dhigtay inuu ciyaaro kubada cagta marka la eego xaaladaha adag. Indho indheyn ah oo ka socota Xeerka Nidaamka Britishka wuxuu u adeegay sarkaalkiisa xabsigiisa. Waxa uu Jamie u sameeyay gashan elektaroonik ah oo lagu rakibay jirkiisa muddo lix bilood ah.
Intaas waxaa dheer, bandow waxaa lagu soo rogay sharci isaga oo u adeegay sidii tallaabo anshax. Tani waxay xadidan tahay waqtiyadiisa ciyaaraha kubada cagta sida ugu badan ee uu xirnaa.
Waad ku mahadsan tahay aqrinta maqaalka Vardy ilaa iyo hadda. Kooxdayadu waxay ku dadaalayeen sax ahaanta iyo cadaaladda inta ay ku gudajiraan samaynta Sheekada Carruurnimada iyo Xaqiiqda Taariikh nololeedka ee Magaalada 'Leicester' Fast Fox '.
Haddii aad aragto wax aan qummanayn maqaalkan oo ku saabsan Jamie, fadlan xor u noqo inaad ka wada hadasho qaybta faallada.